Ubuntu beLibra: Ukuqonda ngeenkwenkwezi kolu Phawu luthandekayo - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ubuntu beLibra: Ukuqonda ngeenkwenkwezi kolu Phawu luthandekayo
Sityhila iimpawu, iimpazamo kunye nokuhambelana kweLibra. Funda ngobuntu beLibra malunga nengcali yeenkwenkwezi yokuqonda malunga nolu phawu lwe-zodiac.
Abemi baseLibra bahlala bekhangela uxolo, ubulungisa kunye nokulinganisela. Ukuba lo ngumqondiso wakho, waziwa ngokuba nobubele, ukuqonda, kunye nemfesane kubo bonke odibana nabo. Ngaphezulu kwako konke, unqwenela ubambiswano kwaye uyakucaphukela ukuba wedwa ixesha elide, nto leyo ichaza ukuba kutheni oyena mnqweno wakho kukuseka ubudlelwane obuqinileyo nabo bakungqongileyo! Fumana ulwazi ngakumbi ngeenkwenkwezi kubuntu beLibra kwaye ufunde ngezinye zeemfihlo zakho ezigcinwe kakuhle. Unempawu ezininzi ezimangalisayo onokuthi uzinike, masizifumanise apha noSusan Taylor!
Iinyani ezibalulekileyo malunga nalo mqondiso
Yintoni intsingiselo emva kwalo mqondiso?
Zeziphi ezona mpawu zibalaseleyo zinxulunyaniswe nale zodiac?
Njani ngeziphene zabo?
Kuthekani ukuba iLibra luphawu lwam olukhulayo?
Loluphi uphawu oluhambelana kakhulu?
Iinyani ezibalulekileyo zokwazi malunga nobuntu beLibra
Sikhethe iinyani ezili-15 malunga neLibra ekufuneka uyazi!
Imihla yeLibra: NgoSeptemba 22-Okthobha 23
Amanqaku omeleleyo: Ukulingana, ubulungisa, uxolo
Ulawulo lweplanethi: UVenus
Iimpawu: Ukufuna ukwazi, ukuhlala nabantu
Iimpazamo: Ukuthandabuza, inkwalambisa
Ubuncwane: Isafire, ikorale exabisekileyo
Iintsimbi: Ubhedu, iplatinam
Amalungu oMzimba ahambelana nawo: Izintso, isinyi, iprostate
>> Funda malunga neminye imiqondiso yeenkwenkwezi apha<<
Intsingiselo yophawu lweLibra zodiac
IVenus yinkwenkwezi yakho, echaza ukuba kutheni umtsalane wakho otshabalalisayo noqondayo usebenza ngokumangalisayo kwabo bakungqongileyo. Uluvo lwakho lokuvisisana lukho kuyo yonke indawo, ukusuka kwindlela ozibonakalisa ngayo, kwindlela othetha ngayo. Utsala iliso kunye nomdla wabantu. Ewe abantu bafuna ukuzityand 'igila kuwe, kuba bakholelwa ukuba uthembekile kwaye uthembekile. Ngayiphi na imeko, ngokuqinisekileyo ukhupha isixa esikhulu sentlalontle kunye nobumnandi. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ulumke, kuba ukuqonda kwakho okugwenxa inokukukhokelela kwindlela engeyiyo! Uthando sisizathu sakho sokuphila kunye nokulingana kwakho.
Imihla yeLibra iqala nge-22 kaSeptemba-Okthobha 23 kwaye nasi isishwankathelo sobuntu babo
ILibra luphawu lomoya, kwaye le nto inxulunyaniswa nengqondo kunye nobukrelekrele, njenge-Aquarius kunye neGemini. Aba bemi bafuna ukukhuthazwa kwangaphandle ukuze kuthintelwe isithukuthezi. Abemi balo mqondiso bayathanda Zingqonge ngobugcisa, umculo kunye neendawo ezintle ukuze zizalisekise amandla azo apheleleyo. Ukungakhethi buso, ukuthiyile okungekho sikweni kwaye kuyasebenza ukukhusela nakuphi na ukubonakaliswa kwako. Ikhetha ukushiya imvakalelo yoxolo kunye nokubaleka ungquzulwano, endaweni yokujongana nokoyika.
Kuyamangalisa, kodwa phantse kungafikeleleki, aba bantu bathanda wonke umntu. Izopolitiko kuzo zonke iimeko, zikhululekile ngokulinganayo ngabalinganiswa abanzima njengabanobuntu obuguquguqukayo. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha bangangqinelani ngokweemvakalelo, Ukusuka kwimbeko ukuya ekukhohlakaliseni, ukusuka kwithemba lasendle ukuya kukungabi nathemba.
Aba bantu banomtsalane kakhulu, banamandla amaninzi kwaye sathetha nazo zikhulu zothando?! Abantu bayayithanda eyakho umtsalane owonakalisayo kuba iluhlaza kakhulu kwaye yendalo! Olunye lwalo mqondiso weenkwenkwezi Ezona mpawu zodiac yeyabo ingqiqo yobulungisa , kunye nothando lwabo loxolo kunye nemvisiswano.
Libra, yonke into ngawe itsala umdla kunye nokunconywa ngabanye abantu. Abahlobo bakho bafuna ukuzityand 'igila kuwe kwaye bayamhlonela ukuhlalisana kunye nobumnandi. Iinjongo zakho zicocekile kwaye ekugqibeleni nonke Ukufuna kukuba wonke umntu alingane. Ngamafutshane, uthando sesona sizathu siphambili sokuphila kwabo.
ILibra inokungazithembi kwaye ithande ukuchitha ixesha ulinganisa i-pros and cons ngaphambi kokwenza izigqibo. Nangona, phakathi kokuthathela ingqalelo omabini amacala empikiswano, bahlala belibala ukuba nezabo izimvo.
Fumanisa ikamva lakho ngoncedo lwePsychic! Ufundo lwethu alunabungozi ngokupheleleyo kwaye luchanekile!
Zeziphi iimpawu ezinxulunyaniswa nobuntu beLibra? Aba bemi bemihlali banobuhlobo kwaye balungelelene
Unetalente entle yokwenza ubomi bube mnandi. Njengomntu onobuhlobo, onomtsalane kwaye onovelwano, awusoze uthabatheke kwaye uhlala uhlala funa ukuqonda, ukukhanyisa imeko-bume kunye nokufumana imvisiswano. Nokuba injani na imeko, uhlala useluxolweni, ufuna ukubuyisela imali eseleyo, ukufudumeza umoya. Kuluyolo lokwenene ukuhlala nawe.
Xa usebudlelwaneni, ubuthathaka, uthandana, uhenda kakhulu, kwaye uhlala unobuhlobo. Uphepha ungquzulwano kuzo zonke iindleko ngokuthatha indima yomlamli. Kuya kufuneka uvele kwindawo enoxolo, kwaye uyakuphepha ukuba krwada. Ngapha koko, unoluvo olukhulu lobulungisa, ke ngoko uyayenza into yokuba uphathe wonke umntu ngendlela efanele yena.
Zeziphi iziphene ubuntu beLibra abanazo? Aba bantu banobuntwana kwaye baxhomekeke
Nabani na okhohlisiweyo ngozakuzo lwakho kwaye ububele bakho obubonakalayo abunangqondo. Phantsi koncumo lwakho oluvuyisayo lulele ngobuqhetseba obunamandla. Umxhasi? Ewe ngamanye amaxesha ukhona, kodwa awuthandabuzi ukudala ungquzulwano ukuze uvavanye umda wobudlelwane obusondeleyo. Akukho nto uyenzayo kwaye awenzi nto ukuqhubela phambili izinto. Endaweni yokuzama ukukholisa wonke umntu, zama ukugqiba yonke into oyiqalileyo, kuba yindlela oya kuthi ngayo ulawule ngokwenyani ukuzithemba kwakho.
Njengomthandi omkhulu, unokuba yinto engenamsebenzi kwaye ungathembeki. Xa kufikwa kuthando, uyathandabuza kakhulu kwaye kunzima ukukwenza ukhetho, kangangokuba kunganqabile ukuba uphile ubomi obumbaxa. Ngokuqhelekileyo ungumlingane ongumntwana kwaye uxhomekeke kakhulu kwisiqingatha sakho. Ukuba uthandana nomntu onobunzima obunjengobakho ekwenzeni izigqibo, yintlekele eqinisekileyo. Awuyi kuba nakho ukuqhubela phambili kunye kwiiprojekthi.
Kuthetha ukuthini ukuba neLibra njengophawu lwakho olukhulayo?
Ukuba neLibra inyuka kwitshathi yakho yokubeleka ikunceda unqwenele ukulinganisela kunye nemvisiswano. Ke ngoko, uyabaleka ngokwendalo ukusuka kuxinzelelo okanye kwiimeko zoxinzelelo. Kwabanye, lo mntu unyukayo ubenza bazive bethandabuza kwaye bethandabuza, kanti kwabanye, kubenza babe nozakuzo ngakumbi kubudlelwane babo nabanye.
Ngoku ukuba umazi umntu onyukayo, ziveze iinkcukacha zakho ngakumbi:
Ilanga le-Aries ilanga liphuma
I-Taurus ilanga iLibra inyuka
Ilanga leGemini iLibra ekhulayo
Umhlaza welanga iLibra inyuka
Leo sun Libra inyuka
IVirgo sun Libra inyuka
ILibra ilanga iLibra inyuka
IScorpio sun Libra inyuka
Ilanga le-Sagittarius Libra liphuma
Ilanga leCapricorn iLibra ekhulayo
Ilanga le-Aquarius iLibra ekhulayo
I-Pisces ilanga Libra liphuma
Ukuhambelana kweLibra: Ngoobani abadibana kakuhle nabo?
I-Aries yeyona nto ifanelekileyo kulo mqondiso we-zodiac. Ngokudibeneyo, esi sibini siyakuphila ubudlelwane obonwabisayo kuba ukungqinelana kwabo ne-horoscope kunamandla kakhulu. Le duo ayinakuze ikruquke, kwaye abalinganiswa babo abanomdla kunye namaphupha baya kuqinisekisa ukuba bayabhabana. Obu buntu buyithiyile ingxabano, ke abanakuhlala nomntu abaphikisana naye imini yonke. Umntu wamaphupha abo unoxolelwaniso, unothando, unomdla kwiimfuno zabo kwaye uhlala ekhangela imvumelwano.
Eyona midlalo yabo mihle yile:
I-Libra + ukuhambelana kwe-Aries-Le yinto yesini!
Ukuhambelana kweLibra + Taurus -Benza isibini esihle
Ukuhambelana kweLibra + Leo-Banento eyimfuneko yokuhamba yonke indlela
Abantu baseLibra ezothando ezinkulu, zinomtsalane kakhulu kwaye unomdla omkhulu. Ngokubanzi, aba bantu benza amaqabane anyanisekileyo kubudlelwane. Nangona, ukuba bayathandana ngaphezulu komntu omnye ngexesha elinye, izinto zinokuba nzima ngenxa yokungazithembi.
Loluphi uhlobo lwabantu abafanele babaphephe eluthandweni?
Aba bemi bomhlaba kufuneka balumke kwabo basebenzisa izakhiwo zabo kunye nokungazithembi ngokuchasene nabo. Abantu abanekratshi abaziva bengaphezulu kwabanye kunokuphela kubazisile kwaye banciphise ukukhanya kwabo. Ukuba umntu othile ubakhumbuza kaninzi kakhulu ngeentsilelo zabo, kufuneka balibale malunga nobudlelwane.
Iinkcukacha ezithe kratya malunga nalo mqondiso:
Awunako ukukhupha lo mqondiso entlokweni yakho? Nazi izizathu ezi-5 zokuwela iLibra kunye nendlela yokutsala indoda yaseLibra
Yintoni egcinwe namhlanje? I-Libra horoscope namhlanje
Kuqhubeka ntoni kule veki? Funda i-Libra horoscope yeveki nganye
Kushushu apha? Jonga iprofayili yesondo yeLibra
Ngaba lo mqondiso uthandwa kakhulu? Fumana impendulo ngo Luphi olona phawu luqhelekileyo lweenkwenkwezi?
yanamhlanje i-virgoope yasimahla
ukubaluleka kwama-666 kwinombolo
utsalwa yintoni umhlaza
yintoni umahluko phakathi kwekoko kunye necocoa powder